Maxaad ka taqaannaa haweeneyda xijaaban ee madaxweynaha ka ah dal ay muslimiinta ku yar yihiin? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxaad ka taqaannaa haweeneyda xijaaban ee madaxweynaha ka ah dal ay muslimiinta...
Maxaad ka taqaannaa haweeneyda xijaaban ee madaxweynaha ka ah dal ay muslimiinta ku yar yihiin?
Taariikhda dalka Singapore waxaa marki ugu horreysay madaxweyne ka noqotay haweeney muslim ah, sida laga soo xigtay wargayska Huffpost.
Xalima Yacquub, waa haweenay Muslim ah oo xirato xijaabka ayaa noqonaysa madaxweynihii Sideedaad ee dalka Singapore.
Xaliima ayaa ahayd musharaxa kaliye ee buuxiyey shuruudaha qofka xilka qabanaya xilka madaxtinimo lixda sanno ee soo socota.
Doorashadan ayaa gaar ahaan waxa isugu soo haray musharixiin ka soo jeeda qaybaha bulshada ee laga tiro badan yahay.
Xalima waxay si rasmi ah ku noqoneysaa madaxweynaha iyada oo aanan doorasho la qaban, arrintaasi oo muran badan ka dhex abuurtay bulshada dhexdeeda.
Waa Tumaa Xaliima Yacquub?
Xaliima Yacquub oo hadda ah madaxweynaha dalka Singapore waxay dhalatay 23-ka August 1954-kii. Horayna waxay uga soo tirsaneyd xisbiga APP.
Iyada oo soo qabatay xilalka ay ka mid yihiin guddomiyaha baarlamaanka dalka Singapore inta u dhaxeysay 2013-2017.
2001-2015-kiina waxay ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi iyada oo mataleysay goob doorashada Jurong.
Haddaba Xaliima 7-da bisha Augsut 2017-dii waxay iska casishay xilki guddoomiyaha baarlamaanka, xildhibaannimadii iyo xubinnimadi xisbiga PAP, si ay isugu soo taagto doorashada madaxweynanimada dalka Singapore ee dhaceysay 2017-kii.
Waaliddiinta Xaliima, aabaheed wuxuu ka soo jeedo Muslimiinta Hindiya halka hooyadeedna ay ka soo jeeddo Malay.
Haweenaydan oo ah 63 jir ayaa ah Guri-dambeys qoys ka kooban shan qof, waxa la sheegay inay hooyadood ay soo korisay aabo la’aan.
Aabbaheed oo ahaa waardiye wuxuu u dhintay wadna xanuun iyada oo 8 jir ah, kaddib iyada iyo afar carruur ah ay wada dhasheen waxaa rajanima ku soo korisay hooyadeed.
Noolasha qoyskooda oo aad u adkaa awgeed waxay Xaliima suuqa ku iibin jirtay bariis si ay hooyadeed iyo carruurta ka yaryar ay u gacan qabato.
Dugsiga hoose ee waxbarashada waxay ku soo qaadatay dugsiga Singapore Chinese Girls School, dugsi sarana waxay kaga baxday Tanjong Katong girls, waxbarashadeeda sarana waxay ku soo qaadatay jaamacadda Singapore iyada oo baratay culuunta Sharciga shahaadada koobaad iyo tan labaadba ka qaadatay.
Inta ay siyaasadda ku biirinna waxay ku soo shaqeyn jirtay sharci yaqaan, 1992 waxay agaasime ka noqotay machadka daraasaadka arrimaha shaqalaha Singapore.
Xaliimo waxay guursatay oo ay shan carruur ah u dhashay Mohammed Abdullah Alhabshee oo Malay iyo Carab iska dhal ah.
Dalka Singapore, ra’iisul wasaaraha ayaa ah qofka ugu awooda badan dalka, madaxweynaha awood sidaas u weyn ma lahan, hase yeeshee waxa uu leeyahay awoodo muhiim ahBaarlamaanka dalka Singapore ayaa 2016-kii go’aansaday in xilka madaxweynaha la siiyo qowmiyado gaar ah haddii muddo 30 sano ka badan aysan u helin fursad ay ku noqdaan madaxweyne. Markii ugu danbaysay ee uu qof ka soo jeedo qowiyadda Malay uu madaxweyne ka noqdo dalka Singapore ayaa aheyd sanndkii 1970.
Previous articleMadaxwaynaha Dawlada Ajanabigu Illaaliyo e Xamar oo Dagaal Dublamaasiyadeed kusoo Qaaday Jamhuuriyada Somaliand
Next articleFoolkaano ka qaraxday jasiirad ku taal Talyaaniga oo khasaare dhalisay